‘क्यारिङ्ग’को सामानबाटै भरिन्छन् लाखौैंका गोदाम - Arthapage
‘क्यारिङ्ग’को सामानबाटै भरिन्छन् लाखौैंका गोदाम
प्रकाशित मितिः १६ श्रावण २०७८, शनिबार ०६:५५ July 31, 2021
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बरामद गरेको अवैध सामान ।
नेपालगन्ज १६ साउन : ‘क्यारिङ्ग’बाट अवैधरुपमा भारतबाट भित्रा्इएका सामान ठुला व्यापारीका गोदामसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा क्यारिङ्गका सामानबाट भरिएका ठुला व्यापारीका गोदाममा राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले छापा मार्यो ।
कैलालीको एउटै गोदामबाट रु १ करोड १५ लाखसम्मको अवैध कपडा बरामद भएको प्रमुख राजश्व अनुसन्धान अधिकृत सरोज पोख्रेलले बताए । राजश्व अनुसन्धानले यस्तै प्रकृतिका अन्य फर्महरु माथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘क्यारिङ्गबाट भित्रा्इएका सामान ठुला व्यापारीका गोदाममा भेटिनुले राजश्व चुहावटको जालो कहाँसम्म छ भन्ने देखाउँछ ।’– राजश्व अनुसन्धान स्रोतले भन्यो ।
क्यारिङ्गको जालोले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती थपिदिएको छ । नेपालगन्जमा बालबालिका, महिलादेखि बृद्धसम्मलाई भारतबाट सामान ओसारपसार गर्ने क्यारिङ्गका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । पेशेवर क्यारिङ्ग गर्नेहरु नेपाल र भारत दुवैतर्फका व्यवसायीको सम्पर्कमा हुन्छन् । उनीहरुले हरेक सामानको निश्चित पैसा लिएर सामान ओसोरपसार गर्दै आएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । कयौं क्यारिङ्गवालाहरु अवैध सामान नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मींसंग बर्षौदेखि परिचित जस्तै छन् ।
उनीहरुले आपसी लेनदेनमै सामान छुटाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सुरक्षाकर्मीको कयौं चेकपोष्ट पार गर्दै बर्दियाको सितलाबजारको एउटा गोदाममा १ सय २८ बोरा चिनी बरामद हुनुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर स्रोतले भन्यो–‘आधा दर्जन प्रहरी निगरानी झल्दै त्यति ठूलो मात्रामा कसरी चिनी अवैधरुपमा स्टक राखियो ?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले सीमाक्षेत्रमा कुनै पनि नाममा पैसा लिएको पाइए कडा कारवाही हुने बताउँछन् । अवैध सामान नियन्त्रण आफुहरुको पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै एसपी अधिकारी भन्छन्–‘अवैध सामान छुटाउन प्रहरी कसैले पैसा लिएको छ भने तुरुन्त खबर गर्नुहोस्, कारवाहीमा ढिला गर्दैनौ ।’
नेपालगन्जको जमुनाहदेखि चौलिकासम्म सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका आधा दर्जन चेकपोष्ट छन् । तर यिनै आधा दर्जन चेकपोष्ट र अन्य नाका छल्दै तस्करी हुने गरेको छ । यसरी भित्रिएका सामान नेपालगन्जमै स्टक गरेर पहाडी जिल्लाहरुमा पठाइने गरिएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जुनसुकै नाममा पनि व्यवसायीहरुले अवैध काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘नियमसंगत तरिकाले व्यवसाय गर्दा नियमन निकायले अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन । तर अवैध काम कसैले गर्छन भने हाम्रो कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन ।’
प्रकाशित मितिः १६ श्रावण २०७८, शनिबार ०६:५५ |
Prevकुन कुन बैंकले घरकर्जा दिन्छन् ? कसरी लिने ?
Nextनेपालगन्ज -पोखरा उडानले पर्यटनक्षेत्रमा देखाएको आशा र सम्भावना